It is me. Ko Niknayman.: လမ်းမပေါ်က သားသတ်မုဆိုးများ
Posted by Ko Niknayman at 9:35 AM
ဘုန်းဘုန်းသတ်..လက်နက်တွေ မိစ္ဆာတွေကို ၀ယ်ပေးနေတာ.ငေ...
ရုပ်အင်္ဂါနှင့် လိုက်ဘက်ညီသော စိတ်ဓါတ်ရှင်။
အင်္ဂလန်၊ သြစတြေလျ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ မှ လှုပ်ရှားမှ...
သံဃာဥသျှောင်အဖွဲ့ ကြီး ဖွဲ့ စည်း။
ပါးစပ် ဟ ခွင့်မပေးဘူး။
အကိုကြီးတော့ အဖအရာ။ အကြီးကောင်က အဖေထက် သားနှစ်လကြီ...
တွေ့ ဆုံမှုဆိုတာ နဲ့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာတိ...
သူတို့ လည်းဘဲ နအဖအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာပါတယ်။
ဦးထိပ်ပေါ်တင်ပြီး ပန်ဆင်ထားဖို့အမျိုးသမီးထုရဲ့...
အာဏာရူးများ၏ ပြောဆိုချက်အား ချေပချက်။
သြစတြေလျနိုင်ငံကလည်း နအဖအပေါ် ငွေကြေးပိတ်ဆို့ မှုနဲ...
အဲယားပုဂံကြီး (Air Pagan) - Sanctions မိသွားလို့...
မတရားတဲ့အမိန့် မှန်သမျှ တွန်းလှန်ကြ။
စက်မှုဇုံများ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ (ယာယီ) ကြေညာချက်။
ဒီလိုစာမျိုးရရင် အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့ ။ (ကိုယ်ရဲ့အ...
King of Panties
အာဏာမက်မောသူကြီးအတွက် အမျိုးသမီးများက ပေးပို့ သော ...
သင့်ရဲ့ မေးလ်အတွက် သတိပေးချက်။
ကြေငြာချက်(၁) - မဟာမိတ်ပြည်သူ့တပ်ပေါင်းစု
မြန်မာပြည်သား တစ်ဦး၏ ရင်ဖွင့်သံ
ဘဂ၀ါမြတ်ကို တကယ်သတ်တဲ့ မာန်နတ်လိုစစ်တပ်
အနာဂတ်မြန်မာပြည်ရဲ့ငွေစက္ကူသစ်။
ကျုပ်တို့ တစ်တွေ ဘာလုပ်ကြမှာလည်း။
တာမွေမြီု့ နယ်မှ ပြည်သူ့ ရန်သူများ။
အောက်တိုဘာလ (၆) ရက်နေ့ မှ (၁၅) ရက်နေ့ အတွင်း မြန်မ...
၂၀၀၇ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဂုဏ်ရောင်ပြောင်...
နအဖရဲ့မီဒီယာများ လိမ်နေတာ ပေါ်တင်ကြီး အလိမ်ပေါ်ပြီ...
ILO သို့၈၈မျိုးဆက်အလုပ်သမားများမှ ပန်ကြားလွှာ။
ပြည်သူ့ တာဝန် (၉) ရပ်။
မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် နေ့ စဉ်ဖေါ်ပြချက်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းမှ ဒီပဲယင်းလူသတ်သမားအား ...
Text of UN Security Council statement on Myanmar
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။
DO NOT SUPPORT MAI (Myanmar Airways International)...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ဆန္ဒပြပွဲများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ။
ကျွန်ုပ်တို့ မှ အထူးကြေကွဲ ၀မ်းနည်းရ
နအဖကို ကူညီနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အိုလံပစ်ပေါ်ပေါက်လာပု...
မြန်မာပြည်အရေး နိုင်ငံတကာ စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှု -ေ...
နအဖရဲ့မီဒီယာကို မီဒီယာနှင့်တိုက်ခြင်းအကြောင်း။
တစ်နိုင်ငံလုံး ၀မ်းနည်းခြင်း ဆုတောင်းပွဲ ဆောင်ရွက်...
တပ်မတော်သားတွေ အမှန်တရားကို သိကြပါ။ ပြည်သူကို ချစ်...
ဘာသာဖျက်၊ လူမျိုးဖျက်၊ တိုင်းပြည်ဖျက် မိစ္ဆာကောင်။
ဒီမှာ ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှက်နေတာ၊ ကြည့်ကြပါဦး။
FTUB မှ အလုပ်သမားများ တိုက်ပွဲဝင်မည့်အကြောင်း ကြေည...
နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု ဓါတ်ပုံများ (၂)။
ဆက်လှုပ်ရှားနေဆဲ။ စက်တင်ဘာ (၃၀)။
အလုပ်သမားအပေါင်းတို့-
နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှု ဓါတ်ပုံများ (၁)။
SAVE BURMA (S.O.S) မြန်မာပြည်ကို အရေးပေါ်ကယ်ကြပါ။
စက်တင်ဘာ (၂၇) ရက်နေ့ဓါတ်ပုံများ။ (၁)။
ရဲရင့်တဲ့ သံဃာ့ဂုဏ်တော်အားရိုသေစွာ ရှစ်ခိုးပူဇော်ပ...
ယနေ့ ပြည်တွင်းသတင်း ဓါတ်ပုံများ ဖြစ်ပါတယ်။